Hadal isugu jira Xaal-siin Wasiir. Maxamed Kahin, Talo u soo jeedin Madaxweyne iyo mid guud oo shacabka S/Land ku aaddan – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Hadal isugu jira Xaal-siin Wasiir. Maxamed Kahin, Talo u soo jeedin Madaxweyne iyo mid guud oo shacabka S/Land ku aaddan
Published on Jan 23 2018 // Maqaalo
Anigoo in muddo ahba iska ka gaabsaday arrimaha siyaasadda iyo kuwa dhaqankaba, sababo aan mar kale ka warrami doono awgood, waxaa maanta nusqaan iigula muuqatay inaan ka aamuso ama ka hadal la’aado arrimaha maalmahan soo noqnoqday ee ka dhashay madaxdhaqameedka hadalada foosha xun ee qabyaaladda iyo turxaanta leh isugu jawaabay markii dambena lasii kordhiyay ee baraha bulshada lagu sii faafiyay.
Waxaan marka hore aad u soo dhawaynayaa una mahdnaqayaa Suldan Ismaciil Suldaan Cabdiraxmaan iyo Suldaan Mawlid Sabeyse sida milgaha iyo sharafta leh ee ay u garteen hadalkii Suldaan Xassan Suldaan Cabdillahi ee xamaasaddaa kacday horseedka u ahaa inay ka xaal bixiyaan oo cid kastoo dhibsatay ay ka shaafiyaan. Waxaanan rajaynayaa in lagu wada qancay oo dhammaanba intii hadalkaa qoonsatay ay guddoomatay xaalkaa iyo raalligelintaas.
Waxaan kaloo jecelahay inaan halkan ka raalligeliyo oo ka xaal siiyo Wasiir Mohamed Kahin Ahmed oo aan si weyn uga damqanayay hadaladii aan munaasibka ku ahayn ee odayaashaydii aanu tolka ahayn kula dul kufeen kuwaasoo markaan qaarkood waraystay si qaldan loogu warramay. Maxamed Kaahin waxaan qabaa intaan ka bartay inuu yahay shakhsi ballaadhan oo kaalinta loo dhiibay aan is leeyahay waa masuulkii ugu habboonaa (the right person). Waxaan qabaa inuu yahay masuul aqoon badan dadka iyo dalkaba u leh oo ummada isu soo jiida kara. Xilkaana hadday noqoto xag amni iyo mid maamulba uu khibradeedii, odeynimeedii iyo degenaanshaheediiba leeyahay.
Wasiir Maxamed waa nin dalkan tacab badan ku leh taariikhdiisana si wacan loo wada garanayo kana mid ah ashkhaasta birmageydada ah ee xurmada inaga wada mudan.
Maxamed waxan jecelahay inuu xaalkaa iga guddoomi doono. Inshaa Allah sidaan ka codsaday qaar ka mid ah odayaashii hadalada deelqaafka ahi kaga yimaadeena iyana raalligelin ayay ka saameyn doonaan wararkaa sida xun loogu tabiyay iyo hadaladii xanafta lahaa ee ay kaga jawaabeenba.
Intaa ka dib waxaan xukuumadda, gaar ahaan madaxweynaha, u soo jeedinayaa inaan fursad la siin sabab kasta oo cadawgeennu ka dhex faa’iidaysan karo, isla markaana uu u tanaasulo wixii macquul ah ee ay ka tabanayaan xisbiyada macaaradka iyo taageerayaashoodu. Madaxweynuhuna waa inuu marwalba ummadiisa u muujiyaa kalsooni iyo caddaalad iyo inaan cid ama reero gaar ahi iska xigsiin inta kale.